नुवाकोटलाई काठमाडौंसँग सुरुङमार्गबाट जोडिने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत मुलुकभर निर्माण गरिने विभिन्न ७ वटा सुरुङमार्ग मध्ये सबैभन्दा तयारी अबस्थामा रहेको योजनाको रूपमा टोखा–छहरे सुरुङमार्ग भएको सडक विभागले जानकारी दिएको छ । विभागका वैदेशिक सहयोग समन्वय महाशाखाका अनुसार चीन सरकारले बनाउन चाहेको यो सुरुङमार्ग नागढुङ सुरुङमार्ग पछिको दोस्रो हुने अनुमान गरिएको छ । निर्माण तयारी र दातृ निकायको चासो तथा सम्भाव्यता सकिएर तयारी अवस्थामा बसेको योजनाको रूपमा यो सुरुङमार्ग रहेको पनि विभागका वैदेशिक समन्वय महाशाखा प्रमुख सञ्जय श्रेष्ठको भनाइ छ ।
साङघाइ निर्माण ग्रुपले चक्रपथ निर्माणका लागि आवश्यक अलकत्रो प्रशोधन गरिने प्लान्ट नजिकै ३ ओटा गाई अलकत्रोले जलेर छटपटीरहेको अवस्थामा भेटिएका छन् २ ओटा गाईको मृत्यु भइसकेकाले अलकत्रा प्रशोधन गर्ने कम्पनीले नै गाडेको थियो । कम्पनिले अलकत्रा राखेको ठाउँ तार वार नराखेका कारण गाईहरु त्याहा प्रवेश गरेका थिए । कम्पनीको लापरवाहीका कारण गाईहरुको मृत्यु भएको स्थानियहरु बताउछन् ।
ऐतिहासिक महत्वको धरहरा पुनर्निर्माणका लागि छवटा कम्पनीले टेण्डर हालेका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गरेको टेण्डरमा धरहरा पुनर्निर्माणमा छवटा कम्पनीले आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव पेश गरेका हुन् । प्राधिकणका सहसचिव राजुमान मानन्धरले नेपाली कम्पनीले चिनियाँ कम्पनीसँग मिलेर टेण्डरमा भाग लिएको जानकारी दिए ।
विकास निर्माणका क्रममा निर्माण व्यवसायीले कमसल सामग्री प्रयोग गरे १० वर्ष जेल र एक लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने भएको छ। आगामी भदौ १ देखि कार्यान्वयनमा आउन लागेको मुलुकी ऐन ०७४ को फौजदारी संहिता ऐनमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हाे। मुलुकी एेन ०७५ फौजदारी संहिता ऐनको दफा २५० मा निर्माणसम्बन्धी काम वा अन्य कुनै पनि जिम्मेवारी लिएका व्यक्तिले बेइमानीपूर्वक निर्धारित मापदण्ड वा गुणस्तरको सामग्री प्रयोग नगरी काम गरेकाे पाइएमा बारबाही हुने खबर छ।
चिनियाँ नाका जोड्ने ५ वटा सडकहरुको निर्माण कार्य यतिबेला धमाधम अघि बढिरहेको छ । सरकारले हालसम्म आफ्नै श्रोतबाट निर्माण कार्य अघि बढाईरहेका ती सडकमध्ये कोशी करिडोर, कालीगण्डकी करिडोर र कर्णाली करिडोर भने राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनामा पर्छन् ।
गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर १० र अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिका वार्ड नम्बर ६ को बिचमा पर्ने रैया खोलामा पक्कि पुलको निर्माण गरिएको छ । कुल ३५ लाखको लागतमा दुई बर्षमा उपभोक्ता समितिमार्फत पुलको निर्माण गरिएको हो । पुल निर्माण भएसँगै दुवै जिल्लावासिलाई ओहोर–दोहोर गर्न सहज भएको छ ।
भैरहवास्थित सिद्धार्थनगर पालिका–१२ का अभिरत अग्रवाल भारतमा पढाइ सकेपछि नेपाल आएरै केही गर्न चाहन्थे । व्यापारिक परिवारका भए पनि उनमा व्यापारबाहेक केही गरौ भन्ने चाहना थियो । फोहोरबाट मोहोर बनाउन सकिने सुनेका उनी फोहोरबाट ऊर्जा र मल दुवै उत्पादन गर्न भनेर कस्सिए । बायोमास निर्माणको जर्मन प्रविधिबारे समेत उनले अध्ययन गरे ।
पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गको मध्यभागमा पर्ने बुटवलस्थित तिनाउ नदीको पुल कमजोर बन्दै गएको छ । पुलमुनिबाट जथाभावी नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, बालुवा र मिस्कट) निकाल्दा पुल कमजोर बनेको हो । तिनाउ नदीको बढ्दो दोहनको असर पुलमा परेको छ ।
गुल्मीका बिभिन्न सडकहरुमा यतिबेला सडक स्तोरन्नतीको कामले तिब्रता पाएको छ । रुद्राबेणी-वामीटक्सार सडक र चोरकाटे-शान्तिपुरमा नाली काट्ने, पर्खाल उठाउने, सडक चौडा पार्ने, ग्राभेलिङ गर्ने जस्ता कामहरु तिब्र गतीमा भईरहेका छन् ।
गुल्मीका बिभिन्न सडकहरुमा यतिबेला सडक स्तोरन्नतीको कामले तिब्रता पाएको छ । रुद्राबेणी-वामीटक्सार सडक र चोरकाटे-शान्तिपुरमा नाली काट्ने, पर्खाल उठाउने, सडक चौडा पार्ने, ग्राभेलिङ गर्ने जस्ता कामहरु तिब्र गतीमा भईरहेका छन् । गुल्मीमा आर्थिक बर्ष ०७४/०७५ मा ६० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो । केही समय अघी तम्घास–सीमलटारी सडक आयोजना प्रमुख इन्जिनियर सुजन अधिकारीले यस आवको अन्त्यसम्म १५ किमि सडक पिच हुने अपेक्षा गरिएको बताएका थिए तर उनले अपेक्षा गरे बमोजिम यो आर्थिक बर्ष सकिनै लाग्दा सम्म पनी कालोपत्रे भने हुन सकेको छैन ।
अहिलेसम्म पुलका १२ वटा पिल्लर मात्रै खोलामा उभिएका छन् ।
पुर्वाधार निमार्णको ठेक्का राजनीति गर्ने नेताले पाए भने के होला ? उदाहरणको लागि मकवानपुरको बागमती गाँउपालिका ४ र सिन्धुलीको हरीहरपुर ४ जोड्ने बागमती खोला माथिको पुल बनाउने जिम्मा नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य जयराम लामिछानेले लिएका थिए जुन ७ बर्ष देखि अलपत्र छ । २१ करोडको लागतमा ५ बर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी लामिछानेको स्वछन्द निर्माण कम्पनीले लिएको थियो । अहिलेसम्म पुलका १२ वटा पिल्लर मात्रै खोलामा उभिएका छन् । सर्वसाधारण भने डुउबको भरमा खोला वारपार गर्न बाध्य छन् ।
फुङलिङ नगरपालिकाले प्रसिद्ध तीर्थस्थल पाथीभरा क्षेत्रमा केबुलकार निर्माणका लागि अनुमति दिने निर्णय गरेको छ ।
फुङलिङ नगरपालिकाले प्रसिद्ध तीर्थस्थल पाथीभरा क्षेत्रमा केबुलकार निर्माणका लागि अनुमति दिने निर्णय गरेको छ । फुङलिङ नगरपालिका–११ फुरुम्बुको भालुगौंडेमा सुरु र ३ हजार ७ सय ९४ मिटर उचाइमा रहेको मन्दिर परिसरमा अन्तिम स्टेसन हुने गरी केबुलकार बनाउन पाथीभरा देवी दर्शन केबुलकार प्रालि काठमाडौं ५ लाई अनुमति दिएको फुङलिङ नगरपालिकाका प्रमुख छत्रपति प्याकुरेलले बताए ।
अब डाँडाकाँडामा केवलकार, २४ वटा कम्पनीले मागे अनुमति (हेनुस् सूचीसहित)
नेपालमा केवलकार सञ्चालको सम्भावना देखिएको भन्दै अग्ला स्थानका अधिकांश मन्दिरलाई दृष्टिगत गरेर धमाधम केवलकार सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन थालिएको छ ।
नेपालमा केवलकार सञ्चालको सम्भावना देखिएको भन्दै अग्ला स्थानका अधिकांश मन्दिरलाई दृष्टिगत गरेर धमाधम केवलकार सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन थालिएको छ । नेपालका डाडाँकाडाँमा केबलकार सञ्चालन गर्न अनुमति माग गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायता मन्त्रालयमा आवदेन दिने कम्पनीको संख्या २४ वटा पुगेको छ । यी २४ वटा कम्पनीमध्ये एउटै स्थानमा अनुमति माग्नेदेखि फरकफरक स्थानमा केबलकार सञ्चालन गर्न माग गर्ने कम्पनी एक पछि अर्को गर्दै धमाधम मन्त्रालय थाउन थालेका छन् ।
वस्तु शव स्टेशन अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई कार्वाही गर्ने को ?
गुल्मीको वस्तुमा एक दशक अघि देखि निर्माण कार्य सुरु गरिएको करोडौं लागतको शव स्टेशन भवन र आवास गृह भवन अलपत्र परेको छ । २०६३/०६४ सालमा सुरु गरिएको वस्तु शव स्टेशनको भवन एक तला ढलान गरी हाल सम्म अलपत्र पारिएको छ । एक दशक अघि अलपत्र योजनामा राज्यको कुनै निकायको नजर नपरेपछि स्थानियले ति ठेकेदारलाई कार्वाही गर्ने को ? भनेर प्रश्न गर्ने गरेका छन् ।
राष्ट्रिय गौरवको योजना मानिएको सुनसरीको धरान– चतरा, गाईघाट– कटारी, सिन्धुली–हेटौँडा सडक आयोजनाको पूर्वी खण्ड निर्माणको काम तीव्र रुपमा अघि बढेँकोछ ।
राष्ट्रिय गौरवको योजना मानिएको सुनसरीको धरान– चतरा, गाईघाट– कटारी, सिन्धुली–हेटौँडा सडक आयोजनाको पूर्वी खण्ड निर्माणको काम तीव्र रुपमा अघि बढेँकोछ । भित्री मधेसलाई राजधानीसँग जोड्ने सबै भन्दा छोटो उक्त राजमार्गको सुनसरी, उदयपुर र सिन्धुली खण्डमा सडक संरचना र पुल निर्माण गर्ने काम धमाधम अघि बढेँकोछ । उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका–४ वीरेन्द्र चोकदेखि सिन्धुलीको भिमानसम्मका विभिन्न भागमा कलभर्ट, कज्वे र पुलपुलेसा निर्माण भइरहेको छ । डेढवर्ष अघि निर्माण कार्य शुरु भएको वैकल्पिक उक्त राजमार्गको करिब ३५ प्रतिशत भन्दा बढी काम पूरा भइसकेको आयोजना कार्यालय गाईघाट उदयपुरले जनाएको छ ।
सरकारले काठमाडौं निजगढ द्रुतमार्ग का लागि १५ अर्ब ३९ करोड बजेट छुट्यायो
२०७५–०८५ लाई ऊर्जा दशक घोषणा गर्दै सरकार
–उत्पादन गर्ने निजी क्षेत्रलाई वेबास्ता गरेको आरो
२०७५–०८५ लाई ऊर्जा दशक घोषणा गर्दै सरकारले यसका लागि १ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । ३ वर्षभित्र ३ हजार, ५ वर्षभित्र ५ हजार र १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित बजेट विनियोजन गरिएको हो । मंगलबार सार्वजनिक बजेटमा सरकारको तर्फबाट जलविद्युत् विकास दशकसम्बन्धी कार्ययोजनाका लागि १९ करोड ४५ लाख तथा अर्थ मन्त्रालयलको ऋण तथा लगानीअन्तर्गत १ अर्ब ६७ करोड ३७ लाख विनियोजन गरिएको छ
बूढीगण्डकी र अन्य ठूलाठूला आयोजना प्रतिस्पर्धाको आधारमा बनाउने
“बूढीगण्डकी र अन्य ठूलाठूला आयोजना प्रतिस्पर्धामार्फत अघि बढाएर लगानीसमेत आकर्षण गर्छौं "
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले तनहुँ सेतीको पिपिए स्वीकृत गर्यो
नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले १ सय ४० मेगावाटको तनहुँ सेती (माथिल्लो सेती) जलाशय जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) स्वीकृत गरेको छ ।
पर्वतको पुलचोक क्षेत्रको नदीकिनारमा पक्कि पर्खाल निर्माणको कामलक्ष्य अघिनै सकियो
रेलका विषयमा कामभन्दा कुरा बढी भएपछि चिनियाँ पक्ष असन्तुष्ट
नेपालमा रेलमार्गका बारे राम्रै चर्चा परिचर्चा भएको छ । आजै रेल आयो, भोलि नै रेल आयो । रेल चलिसक्यो जसरी चर्चा भएको छ ।
पक्राउ पर्ने डरले धमाधम निर्माणमा जुटे ठेकेदार
लमजुङमा बर्षौसम्म पुल निर्माण अलपत्र पारेर बसेको दुई निर्माण कम्पनीले काम सुरु गरेका छन् । समयमा निर्माण सम्पन्न नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई कारबाही प्रक्रिया थालेसँगै उनीहरू पुल निर्माणमा जुटेका हुन् ।
काठमाडौं ४ रुटमा यात्रु ओसार्न केबलबार
सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा यात्रु सेवाका लागि केबलबार सञ्चालनका लागि गृहकार्य थालेको छ । निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने गरी सरकारले केबलकार सञ्चालनको तयारी थालेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ । ४ वटा रुटमा केबलकार सञ्चालन गर्न छलफल सुरु भएको छ ।
हुलाकी सडकमा सीमा विवाद
जिल्लामा हुलाकी सडकको सीमा कति कायम गर्ने भन्नेमा विवाद देखिएको छ । सरोकारवाला निकाय नै २५ मिटर राख्ने कि १५ मिटर भन्नेबारे अन्योलमा छन् । स्थानीयले भने ११ मिटर मात्र राख्न दबाब दिँदै आएका छन् ।
सरकारले चुरे तथा भित्री मधेस हुँदै नयाँ ‘पूर्व–पश्चिम मदन भण्डारी लोकमार्ग’ निर्माण गर्ने भएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले आफ्ना नेता स्व. मदन भण्डारीका नाममा चौथो पूर्व–पश्चिम लोकमार्ग निर्माण गर्ने महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम अघि सारेको हो ।
चीनको केरुङदेखि काठमाडौंसम्म बन्ने रेलमार्गको प्रारम्भिक सम्भाब्यता अध्ययन सुरु भएको छ । यसका लागि चिनियाँ प्राविधिक टोलीले सोमबारबाट काम थालेको छ । प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्ट भदौ १५ भित्र ल्याउने लक्ष्य छ ।
कालीगण्डकी बहुद्देश्यीय परियोजना अघि बढाउन सरकार र लगानी बोर्डसँग लबिङ तीव्र पारिएको छ
विद्युत्, सिँचाइ र जल यातयातसमेत सञ्चालन गर्न सकिने जलाशययुक्त कालीगण्डकी बहुद्देश्यीय परियोजना अघि बढाउन सरकार र लगानी बोर्डसँग लबिङ तीव्र पारिएको छ। परियोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभ लिने पर्वत, बाग्लुङ र गुल्मीका जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय तहका प्रमुखहरूले परियोजना अघि बढाउन सरकार र लगानी बोर्डसँग लबिङ तीव्र बनाएका छन्। सबैभन्दा गहिरो खोंच भएर बग्ने कालीगण्डकी नदीमा जलाशययुक्त परियोजना बनाउन सस्तो पर्ने र बहुउपयोग गर्न सकिने भन्दै लबिडलाई तीव्र पारिएको छ।